MTJIBS ANOTORA PURE PASI PASITI ZVOGOGA NEAGITO | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Featured » MTJIBS ANOTORA PURE PASI PASI PANOGONESESA NEAGITO
Fort Lauderdale-yakavakirwa kamera inotsigira kambani inobata kutenderera kwemagariro uye hunyanzvi nemaitiro
Kweanoda kusvika makore maviri, Michael Taylor, muridzi weMTJIBS - iyo Fort Lauderdale, Florida kambani inotsigira kamera, yanga ichida kuwedzera arsenal yekambani yemhinduro dzavanogona kupa vatengi vavo. Asi panguva iyoyo, aisakwanisa tsvaga iyo yakakodzera sisitimu yekudyara mune iyo inoenderana nezvinodiwa zvakanyanya zveindasitiri. Ipapo akaona iyo Motion Isingaite AGITO modular dolly system.
"Ini ndanga ndichingotsvaga anoshanda dolly anga akavimbika mushoo yekuratidzira," akatsanangura Taylor. “Ipapo ndakaona iyo AGITO ichishanda uye yakafadzwa. AGITO yakaunza kuita kwakasiyana-siyana zvese zviri zviviri uye kubva panzira - inogona kuita zvese zvataida kuita uye nezvimwe… zvisina waya. Saka, tine. ”
AGITO ndiyo yekutanga modular yenyika kure dolly. The AGITO inoratidzira masisitimu akawanda, ichibvumira kufamba kwakatsetseka kubva kunonoka, kunyatso kufamba kwedolly kuenda kune yekumhanyisa-track track oparesheni, zvese mukati meimwe mhinduro inotakurika. Iine shanduko yakapusa uye nekukurumidza kwekutyaira kwayo kunopera, iyo AGITO inogona kugadzirirwa yemahara yekufamba mashandiro muSports mode, kana kunyatso kufamba pamatare muTrax modhi. Taylor pakupedzisira akawana AGITO YAKAKWANISA system, iyo inopa kune ese echinyakare njanji kushandiswa uye yakawanda-terrain kushandiswa, neAITIT Tower iyo inopa iyo system 700mm yekusimudza.
"Ehe, tichangogamuchira iyo AGITO, kudzima denda kwakatanga, asi izvo zvakazopedzisira zvave kutibatsira sezvo sisitimu isina waya uye ichipa kuremara munharaunda nekugadzira," akadaro Taylor. "Takaziva kuti takatenga zvakakwana." Pamwe na Xavier Mercado, MTJIBS kamera inofamba nyanzvi uye anoshanda, kambani yakatanga kusimudzira sisitimu.
Basa rekutanga reMTJIBS idzva reAGITO modular dolly system raizove reNASA uye May 30 kuvhurwa kweSpaceX Crew Dragon Demo-2 - yekutanga yekuyedza bvunzo yeCrew Dragon spacecraft uye yekutanga yekugadzira orbital spaceflight yakatangwa kubva kuUnited States kubvira kwekupedzisira Space Shuttle mission, STS-135, muna 2011. Basa iri rakauya kuburikidza nekutumirwa kubva kuMotion Impossible mushure mekunge kambani yafonerwa neNASA, sezvo MTJIBS iri makiromita mazana maviri kubva kuKennedy Space Center. MTJIBS ichave nebasa rekutora nguva yechinyakare yevashandi vachipinda mumotokari dzavo dzekufambisa mushure mekubuda muNeil Armstrong Operations uye Checkout Building (yaimbozivikanwa seManned Spacecraft Operations Building) uye vachikumbira mifananidzo. Kufamba kunze nekupinda mumotokari dzekufambisa mapfuti anozivikanwa pasirese, kutenderera maGemini, Apollo, Skylab, uye Space Shuttle eras. Asi panguva ino, NASA yaida kuita chimwe chinhu chinesimba pane yakajairwa kamera pani.
(Pfuti inogona kuoneka pano www.youtube.com/watch?v=vAtCOwgSiEo)
Zvinoenderana naMercado, iyo AGITO sisitimu ndiyo yaikurumidza chikamu chemidziyo yavo yekuvaka. “Ungano yekutyaira inopera, shongwe, netambo zvese zvaimhanya kwazvo. Wireless control system yakashanda zvakanaka uye yanga yakasimba nguva yese. ” Kunyangwe iyo AGITO ichigona kuvhiyiwa nemunhu mumwe, vese Taylor naMercado vakashanda system naTaylor vachimhanyisa kamera musoro mugomo uye Mercado achibata iyo AGITO. "Nevanhu vaviri, oparesheni inofamba mushe, asi iyo AGITO inotsvedzerera kana ichishandiswa nemunhu mumwe achishandisa tsoka," akadaro Mercado.
Zviitiko zvinotevera zveMTJIBS zvingave zvakasiyana zvirongwa zvemubairo. Ipo iyo kambani yanga ichipa masevhisi kune ese ari maviri Telemundo uye Univision kweanoda kusvika makore makumi maviri, chirongwa chega chega chinoda MTJIBS ichipa chikumbiro chebasa ravo sevagadziri vanogara vachitsvaga nzira dzekugadzira dzekutora mharidzo dzavo.
Izvi zvaisanganisira iyo Billboard ChiLatin Mimhanzi Mipiro 2020 yeTelemundo uye iyo Yechi21 yegore Latin Latin GRAMMY® Makomborero uye Premios Juventud (Vechidiki Makomborero) 2020 ye Univision.
"Premios Juventud takabudirira zvikuru apo takafambidzana neAGITO negimbal yakadzikama ye SHOTOVER G1, ”akadaro Taylor. “Asi AGITO chete yakasimbiswa zvakanyanya kupfuura mamwe masisitimu, kunyangwe isina musoro wakagadzikana. Vatungamiriri vanonyatsoda iyo AGITO sezvo ichivapa iwo huwandu hwakawanda hwekushanduka kuchinjika pamwe nehukama hwehukama. Mumwe director akatotsanangura chirongwa ichi se 'nyeredzi yeshoo' sezvo yaishandiswawo sekamera huru, uye zvaifadza kunzwa. ”
"Vatungamiriri vari kuwedzera kugadzira neECVID-19 matanho," akadaro Mercado. "Maseti ese matsva akagadzirwa nechinangwa chekudzivirira tarenda nemaartist, asi zvakadaro chinofanira kunge chiri chiratidzo chinonakidza uye chine simba."
Zvekugadzirwa kweTelemundo kweiyo Billboard ChiLatin Mimhanzi Mipiro 2020, seti yacho yakagadzirwa nematanho mana mune fomati yeasna, nemuratidzi ari pakati pezvikamu, sekureva kwaMercado. "AGITO yaive yakanakira dhizaini dhizaini iyi. Iyo inogona kuendesa kupfura kwese nhanho uye kutendeukira mukati kune muparidzi nguva yese ichichengetedza panyama nzvimbo. Ichokwadi chakabatsira mukuchengetedza uye kubudirira kweshoo. ”
"Kana varidzi vedu veAGITO vabudirira, isu tinobudirira," akadaro Rob Drewett, CEO uye Co-Muvambi weMotion Impossible. Kugona kuendesa MTJIBS kuNASA uye nekuona mashandisiro avakaita AGITO kubatsira vagadziri kuve neunyanzvi ndosaka takagadzira hurongwa. Ipfupi uye ipfupi pane dhoriyasi uye inonunura mafambiro aungadai usina kumbobvira wakwanisa kuita. ”
Munguva pfupi yapfuura, MTJIBS yanga ichiona yakawanda xR - Yakawedzerwa Reality, mubatanidzwa weAugmented uye Mixed Reality - mimhanzi yekugadzira basa.
Taylor haaoni kugadzirwa kuchidzokera kune pre-denda nzira. “Takadzidza hunyanzvi hutsva nehunyanzvi hutsva. Ndicho chimwe chezvikonzero chatakatenga iyo AGITO pakutanga. Zvese zviri kungoenda nenzira iyoyo uye takagadzirira ramangwana. "
"Tinoda zvakachengeterwa AGITO," akadaro Mercado. Motion Isingaite inogara ichigadzira tekinoroji nyowani yeramangwana. Uye kwatiri, AGITO iri kubatsira kusimudzira kambani yedu nekuvhura misika mitsva. ”
Previous: Ongorora Mapiro Ekupa Seminari paKugadziridza Mumhanzi Dzidzo yeCOVID naDante Munguva yeNAMM 2021
Zvadaro: Goldcrest Post Inowedzera Veteran Colourist Alex Berman